SaaS Companies Excel amin'ny fahombiazan'ny mpanjifa. Azonao atao koa…… Ary izao no fomba
Alatsinainy, Aogositra 23, 2021 Alatsinainy, Aogositra 23, 2021 Andy Mickelson
Ny rindrambaiko dia tsy fividianana fotsiny; fifandraisana izany. Rehefa mivoatra sy manavao ny vaovao izy mba hihaonana amin'ny takian'ny teknolojia vaovao dia mitombo ny fifandraisana misy eo amin'ireo mpamatsy rindrambaiko sy ny mpampiasa farany — ny mpanjifa — satria mitohy ny tsingerin'ny fividianana maharitra. Matetika ireo mpamatsy lozisialy toy ny serivisy (SaaS) dia miavaka amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa mba ho tafavoaka velona satria mirotsaka amin'ny tsingerin'ny fividianana maharitra amin'ny fomba mihoatra ny iray izy ireo. Ny serivisy ho an'ny mpanjifa tsara dia manampy amin'ny fiantohana ny fahafaham-pon'ny mpanjifa, mampiroborobo ny fitomboana amin'ny alàlan'ny haino aman-jery sosialy sy ny referansa am-bava ary manome
Hanjary ho romotra ity. Tsy mandalo herinandro fa tsy manana orinasa manontany ahy aho hoe ohatrinona no takianay amin'ny tranokala vaovao. Ny fanontaniana dia nanangana saina mena ratsy tarehy izay midika matetika fa mandany fotoana ho ahy ny manenjika azy ireo amin'ny maha-mpanjifa ahy. Fa maninona Satria mijery tranonkala iray izy ireo ho toy ny tetikasa static izay misy fiandohana sy fiafarany. Tsy… fa mpanelanelana amin'ny tontolo